Ndeupi Musiyano uripo Pakati peC CBD Mafuta Uye Yakazara Spectrum CBD Mafuta? - CBD Online Chitoro
Ndeupi Musiyano uripo Pakati peC CBD Mafuta Uye Yakazara Spectrum CBD Mafuta?
Yakazara Spectrum CBD Mafuta zvigadzirwa zviri kusimuka nekukurumidza mukuzivikanwa kwehutano mabhenefiti ayo anosanganisira zororo kubva pakurara nyaya, kurwadziwa, kuzvimba uye kusagadzikana. Unogona kunge uchiziva zvimwe zvekushandisa izvi, zvisinei kune maviri akasiyana mhando dzeCBD zvigadzirwa mune CBD musika. Dzidza zvese zvaunoda kuziva nezve CBD kuzviparadzanisa vs. yakazara yakazara CBD oiri, kusanganisira simba reimwe neimwe, yakakurudzirwa mashandisiro uye maitiro ekufunga pakati pezviviri.
CHII CHAKAZARA SPECTRUM CBD?
Iyo hemp kana cannabis simiti inogara kumazana emapytochemicals, ayo anosanganisira akadai cannabinoids se, terpenes uye mamwe makemikari makeups. Yakazara spectrum CBD Oiri inoreva zvigadzirwa zvine zvakawanda zvinopfuura iyo chete CBD komputa, senge mamwe mamorekuru emiti senge mafuta acids, THC uye terpenes zvinoramba zvakamira. Yakazara mafuta eCDD mafuta anowanzozodaidzwa kuti "chirimwa chose" oiri nekuti izere makemikari ekugadzirwa kwemichero yemichero inosanganisirwa.
CHII CHINONZI CBD ISOLATE?
CBD kuzviparadzanisa inowanzo kunzi "yakachena CBD" kana mune 99 kusvika 100 muzana CBD. Sezvaungave wafungidzira kubva kuzita, izvi zvigadzirwa zvakagadziridzwa kupatsanura chete iyo CBD komputa isina mamwe terpenes kana cannabinoids. Yayo CBD potency inowanzo kuve yakakwira kupfuura yakazara yakazara, zvichireva kuti diki diki inowanzo kukurudzirwa.
KUSHANDISWA KWEMAHARA SPECTRUM CBD MAFUTA VS CBD ISOLATE
Yakazara spectrum CBD Oiri inowanzo kuve inodiwa kumedza CBD kupatsanura nekuti kutsvagisa kunoratidza kuti terpenes uye cannabinoids zvinoitika mune zvakasikwa pamwechete uye kana zvabatanidzwa zvinoshanda nenzira dzinobatsira. Iyi synergy inonzi iyo inovhiringidza mhedzisiro uye inofungidzirwa kuti inopa CBD kureba kusvika kusvika kune zvakanaka zvehutano.
Imwe ongororo yekudzidza yakapedzwa naEthan Russo, MD, yakaongorora zvakanakira terpenes mune yakazara yakazara CBD, ichiratidza mhedzisiro inovimbisa yemamiriro akasiyana siyana. Semuenzaniso, kusanganiswa kwe terpenes caryophyllene pinene uye myrcene uye kubatsira tor kubvisa kushushikana, nekubatanidza terpenes limonene uye cannabigerol (inozivikanwa zvishoma cannabinoid) inoratidza vimbiso yekurapa MRSA. Kunyangwe terpenes limonene uye yakabatana neCBD inogadzira yekurapa-acne kurapwa kwakasimba. Iyi ongororo inoratidza kuti yakazara yakazara CBD yakawanda yeakazara-muviri ruzivo.
Imwe ongororo yeIsrael yekudzidza pamusoro pesimba re CBD inoparadzaniswa maringe nekuzara kwakazara CBD yakaratidza kuti yakazara yakazara CBD yaibatsira zvakanyanya muzvirongwa zvekiriniki zvemamiriro akadai sekushushikana uye kuzvimba. Yakachena CBD yakaguma ne "bhero-rakaumbwa dhizaini mhinduro," zvinoreva kuti, kana huwandu hweCDD hwapfuura imwe poindi, kurapwa kwaro kurapwa kwakadzikira zvakanyanya.
Nekudaro, izvi hazvireve kuti CBD kuzviparadzanisa hakumbofi kwakabatsira. Vamwe vashandisi vanonyanya kutarisisa THC vanodzokera kuCBD kuzviparadzanisa kuti vabatsirwe nemuti wehemp pasina imwe yemhedzisiro yemhedzisiro yeTHC. Zvakare avo vari kunetsekana nezve kuyedza kwakanaka kweTC vanosarudza kuzviparadzanisa kweCBD. Zvakare, CBD inopatsanura inobvumidzawo vashandisi kunyora kuti ingani CBD yavari kuwana kubva kune imwe nhanho.
IYO CBD ISOLATE KANA YAKAZARA SPECTRUM CBD ZVAKANAKA?
Kunyangwe iwe uchisarudza Yakazara Spectrum CBD Oiri kana CBD kuzviparadzanisa, iwe ungangozoona iwo maricho ehutano kubva kune iwo cannabis chirimwa. Nezvimwe zvidzidzo zviri kubuda, vaongorori vari kudzidza zvakawanda zuva rega rega nezve mutsauko uripo pakati pemhando mbiri dzezvigadzirwa zveCDD. Uyezve, kune avo vanogara mumatunhu uko yakazara yakazara CBD inoramba isingawanikwe, yakachena CBD inowanzo kupa mhinduro yepamutemo uye yakanaka. Mushure mezvose, kunyangwe iyo diki CBD inobatsira kupfuura hapana CBD zvachose.
Dzvuku Emperor CBD YEMAHARA SPECTRUM CBD MAFUTA
Red Emperor CBD ine yepamusoro mhando Yakazara Spectrum CBD Oiri inotengeswa pamhepo uye yedu yechitatu bato kuyedzwa inovimbisa kuti iwe uchagamuchira iyo chaiyo huwandu hweBDD.
Iwe Unogona Ikozvino Kukwira Zvakakwirira zviri Pamutemo MuMazhinji States. NaLifehacker